राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल : नेता गुरुङ « Nepal Page
राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल : नेता गुरुङ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायलय, संसद तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा डेडलक भइरहने हो भने शंकटकालको स्थिती सिर्जना हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन । उनले पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकोले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताए । नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए । नेता गुरुङले नेपालमा अहिले न्यायालयमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्तिहरु गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउने दावी गरे । उनले एमसीसी सम्झौता देशको हीत बिपरित् रहेको पनि दावी गरे । यो सम्झौताअमेरिकाको नेपालमा सैन्य शक्ति सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र भएको बताए । अमेरिकाले नेपालमा सन्य रणनीति साझेदारीका लागि अहिलेसम्म आफ्ना तीन वटा रणनीति खेलेको बताए । उनले सैन्य रणनीतिमा लैजान यसभन्द्या पहिला पनि अमेरिकाले नेपाललाई आईपीएसको अंग बन्यो भनेर घोषणासमेत गरिसकेको तर पछि बिरोधका कारण सुनसान बनेको बताए । नेता गुरुङले एमसीसीको माध्यमबाट सैन्य रणनीति बनाउने चल पनि कमजोर बनेपछि अमेरिकाले देशमा भएका सरकारका अंगहरुलाई निस्तेज बनाउने काम गरिरहेको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङसँग समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ता ।
अहिलेको सिस्टम संविधानको दस्ताबेज हो । सम्झौताको सिस्टम हो । पूँजिवादी पार्टीहरुले परम्परागत खालको पार्लिमेण्टको सिस्टममा नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ । र लेफ्टहरुले भन्ने गरिरहेको विषय र खासगरि माओवादीहरुले भन्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दा परम्परागत पार्लिमेण्टली सिस्टमबाट असल अगाडि उठ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको कुरा हो । संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्ताबेजको रुपमा बन्यो । लेफ्ट र कम्युनिष्टहरुले भनेको कतिपय कुराहरु सम्बोधन भएका छैनन् । तर पनि सम्झौतको संविधान बनेको हुनाले विगतकालको तुलनामा एक चरण अगाडि छ । अग्रगामी छ । यसमा गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ । त्यो गणतन्त्र लेफ्ट र पूँजिवादी पार्टीहरुको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ । विशुद्ध पूँजिवादी पार्टीहरुले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए यो मात्र बुर्जुवा डेमोक्रेसी भनेर रहन सक्थ्यो । तर त्यसमा कम्युनिष्टहरु पनि सहभागि छन् ।
त्यसकारण यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पक्कै पनि अन्तरनिहीत छ । पूरै जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त ? यो पनि भन्न नसकिएला, विशुद्ध यो पूँजिवादी गणतन्त्र मात्रै हो त ?परम्परागत खालको पूँजिवादी पाल्र्यामेण्ट मात्रै हो त भन्दा त्यो पनि भन्न नसकिएला । नेपालको एउटा आफ्नै मोलिक किसिमको आफ्नै विशिष्ट टाइपको गणतन्त्र स्थापना भएको छ । प्लस त्यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, लगायतका फण्डामेण्टल राइटहरुलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लगायतका केही मौलिक प्रश्नहरु पनि जोडिँदै गइरहेका छन् । पार्लिमेण्टली सिस्टममा पनि मिश्रित किसिमको, हामीले भनेको सहमतीय पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेशी बनाउनु पर्छ भनेर भनेका थियाँै । अहिलेको स्थितीमा मल्टीपार्टी डेमोक्रेशीलाई नै मान्दाखेरि मल्टीपार्टी डेमोक्रेशीकै प्रेन्सिपलअनुसार सबे पार्टीहरुको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस् राज्यका अंगहरुमा र सबैको प्रतिनिधित्वका साथै सरकारका कुरा किन नहोस्, अन्य अंगहरुमा किन नहोस्। राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई रिप्रेटेन्टिभ खालको सिस्टमबाट लैजाउँ । कम्युनिटी स्तरमा पनि प्रपोलशन रिप्रेटेन्टिभ सिस्टमबाट लैजाउँ । मल्टिपार्टीको रेस्योमा पनि एउटा प्रपोशनल रेस्युमा रिप्रेजेन्टिभ सिस्टममा लैजाउँ ।
त्यसो गर्दा कम्युनिटी बेसिसमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाती, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधितायुक्त समाजलाई एकरुपतामा ल्याउन जरुरी छ । त्यसको लागि पनि प्रपोशनल रेस्यूमा सबैको पार्टीसिपेट्री खालको सिस्टममा लैजानुपर्छ । पार्टीहरु पनि विविध वर्गहरु भएको समाजबाट बनेको भएकोले कुनै न कुनै पार्टीले कुनै न कुनै विचार त बोकेको हुन्छ । त्यसकारणले सबै किसिमका विचारहरुलाई अटाउने खालको थलोको रुपमा लैजानु पर्छ । त्यसको लागि प्रपोशनल रेस्योबाट उपयुक्त हुने खालको, सरकारमा पनि त्यो उपयुक्त हुने खालको मोडलबाट लैजानुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाउँ । दुई वटा पार्टीको सिस्टमबाट जस्तो अमेरिका, भारतले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गरेको छ ।
उनीहरुको सम्बन्धमा उनीहरुको राष्ट्रियतको हिसावले उनीहरु सुरीर छन् । सक्षम छन्, सबल छन् । त्यस हिसावले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन । तर नेपाल जस्ते मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदा नेपालको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ । अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ । राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन त्यो नहुने बित्तिकै बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछ ।त्यसकारणले गर्दा नेपालको डेमोक्रेशी पनि खतरामा पर्न सक्छ । अहिले प्राप्त भएका उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्छन् । त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यसकारणले गर्दा सबै दलहरुको समानुपातिक रुपमा पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसीको रुपमा लैजाउँ भन्ने ढंगले पहल गर्न खोजेको हो । तर तकालको परिस्थितीम काँग्रेस र एमाले सहमत हुन सकेन ।
नसक्दा रुपमा परम्परागत खालको डेमोक्रेसी सत्ता पक्ष र विपक्ष जस्तो बनेको छ । तर हामी अभ्यास के गरिरहेका छौँ भन्दा सहमतिय मोडलबाट लैजानुपर्छ, हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सन्दर्भमा, प्रमुख मुद्दाहरुमा एउटा सहमतिको मोडलबाट लैजानुपर्छ । विधिले सत्ता र विपक्षमा उभ्याइदिएको भएपनि अभ्यास हामीले सहमतिय डेमोक्रेसीबाट हुनुपर्छ भनेर संसदमा म्याक्सिमम रुपले सहमतिय मोडलाबाट लैजानलाई प्रयास गरेका थियौँ । विगतकालमा एकआपसमा सफल पनि भयौँ । सरकारमा सबैलाई सहभागिता गराउन नसके पनि सदनमा आएका विधेयकहरुमाथि सहमतिय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गएका थियौँ । तर पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा सिस्टमप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा नै कतिपय साथीहरुमा अलि ब्याक भएको जस्तो अनुभुति भयो । संसद विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा, गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा, निषेधको चिन्तन प्रक्रियाबाट जान थालियो । यो त परम्परागत पुरानै मोडलमा जान्छ । पुरानै मोडलमा जाँदा सिस्टम पनि डेडलक हुन्छ ।
सिस्टम रनहुँदैन, व्यवस्थापिका, पाल्र्यामेण्ट रनहुँदैन । अदालत रनहुँदैन । सरकारलाई पनि समस्या पर्न थाल्छ । चारैतिर राज्यका अंगहरु शंकटग्रस्त बन्दै जान्छ, संविधानले फंक्शन गर्न सक्दैन, डिफंग हुँदै जान्छ । त्यो हुँदै जाने क्रममा शंकटकालको कुरा आकर्षित हुन खोज्छ । शंकटकालको आकर्षित भयो भने बाह्य शक्तिहरुले प्ले ग्राउण्ड बनाउने ठाउँ पाउँछ । त्यसैले अबको दिशा फेरि पनि दलहरुले गम्भीरतावपूर्वक सोच्ने हो भने सहमतिय मोडलबाट लैजाने हो भने यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ । सिस्टममा भएका त्रुटी कमी कमजोरी अनुकुल समयमा संशोधन गर्दै लैजान सकिएला । तर सहमतिय मोडेलबाट लैजान सकिएन भने सिस्टम कोल्याप्स मात्रै नभइ देशै रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने प्रकारको च्यालेन्ज उठेको छ । अहिलेको च्यालेन्ज त्यही नै हो ।
निश्चित रुपले एमसीसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ । एमसीसीको इस्यूको बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरु खेल्ने क्रममा दुई, तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरुको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाल एउटा स्टाटेडिज पार्टनरशीपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो । स्टाटेजी पार्टनरशीपमा भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो । सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरुको जोडबल हो । आइपीएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो । त्यो प्रयास स्वरुप विगतकालमा कसरी शुर गरेका हुन्छन्, सायद मौखिक रुपले हुन्छ हुन्छ सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ ।त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आइपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ । तर तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र स्ट्रङ्ली बिरोध ग¥यौं । यो सैन्य गठबन्धनमा जाने ? के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यता, भन्दा विपरित् ढंगले जाने ? भन्ने कुरा भएपछि त्यो हुन सकेन । त्यसपछि दोस्रो बाटो के खोज्यो भने एमसीसीको बाटो खोज्यो ।
भन्दा आर्थिक परियोजना भन्ने त्यस बारेमा हो भने विगतकालमा अरु मुलुकहरुसँग अरु दातृ निकायहरुसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन ? त्यो भन्दा नितान्त फरक ढंगले स्टाटेजी मोडेलमा आयो । स्टाटेजी मोडलले संविधान निस्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानून, सरकार निस्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अंगको रुपमा एमसीसी अकाउण्ट गठन गर्ने त्यो संविधान र कानूनको दायराभित्र चल्न नपर्ने नेपालको, अमेरिकी एमसीसी कानूनअनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्र्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, नेपालको तर्फबाट डेलिकेट गरेर उसले एग्रिमेण्ट गर्न सक्ने, उसले गरेका काम कारवाहीको बारेमा नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने, निरिक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । हतियार लिएर आएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । कहीँ आपराधिक घटना भए पनि मुद्दा लाग्दैन । त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन । भनेपछि यो स्टाटेजीक रुपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न ? यो किन पैदा भयो त ? यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेण्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निस्क्रिय भयो । सरकार निस्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद निस्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरु निस्क्रिय गराउँछ ।अदालत निस्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसदले निगरानी गर्न पाउँदैन । सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ । त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो । यो पनि डेडलक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ । तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ग्राउण्ड बनाउने दिशामा जान्छ । पहिलो बाटो उनीहरुले सकेन, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत चलिरहेको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्ता